Fritzing: software yevagadziri uye zvemagetsi (uye dzimwe nzira) | hardware yemahara
Fritzing: software yevagadziri uye zvemagetsi (uye dzimwe nzira)
Imwe yeakanakisa plugins Arduino IDE uye mapurojekiti akavakirwa pazviri bhodhi rebudiriro iri es iyo fritzing software. Chirongwa chinokutendera kuti ugadzire prototypes kana madhayagiramu emaseketi ako usati waaunganidza mukudzidzira. Nenzira iyi, unogona kutarisira mamwe matambudziko kana kutora zvidzitiro kuti ushambadze zvawakaita.
Nekudaro, Fritzing haisiriyo yega software iyo yemagetsi DIY vagadziri uye vanoda vanayo, uye pano iwe unozogona kuziva zvavari. zvayakanakira nezvayakaipira yeFritzing uye ndedzipi dzimwe nzira dzaungashandisa.
1 Chii chinonzi Fritzing?
1.1 Kubatsira uye kusagadzikana
2 Maitiro ekuisa Fritzing nhanho nhanho
3 Dzimwe nzira dzeFritzing
Chii chinonzi Fritzing?
Fritzing ndeye yakavhurika sosi software yakanyatsogadzirirwa avo vanoda kugadzira mapurojekiti emagetsi, kunyanya emahara hardware, uye vasina mukana wezvinhu zvinodiwa. Inogona zvakare kushandiswa kugadzira dhizaini yako, kutora mienzaniso yezvidzidzo, nezvimwe. Pamusoro pezvo, chishandiso ichi chine nharaunda yakakura kuseri kwacho inoichengeta ichienderana kana kuti inoda kubatsira kana uine matambudziko. Inogona kunge iri chishandiso chikuru chekirasi, zvese zvevadzidzi nevadzidzisi vemagetsi, kune vashandisi vanoda kugovera uye kunyora zvinyorwa zvavo, uye kunyangwe kune nyanzvi.
Iyo muchinjika-chikuva, inowanikwa mukati macOS, Linux uye Windows. Chirongwa ichi chakagadzirwa nePotsdam University of Applied Sayenzi, uye chinoburitswa pasi peGPL 3.0 rezinesi kana kupfuura, ukuwo mifananidzo inogona kushandiswa ichipihwa rezinesi pasi peCreative Commons CC BY-SA 3.0 rezinesi.
Inowanikwa mumitauro yakasiyana-siyana seGerman, Chirungu, Spanish, French, Italian, Portuguese, Japanese, Simplified and Traditional Chinese, Russian, Serbian, Korean, Slovak, Romanian, Turkish, Bulgarian, etc.
Iyo software yakanyorwa mumutauro wepurogiramu C ++, uye inoshandisa iyo Qt chimiro. Yese kodhi yayo inowanikwa muGitHub repositori, yakakamurwa kuita akati wandei, seFritzing-App uye Fritzing-Parts, yesoftware uye nezvimwe zvikamu.
Kusvika nguva pfupi yadarika, Fritzing aigona kutorwa mahara kubva pawebhusaiti yavo, asi ikozvino vanokumbira mupiro, unogona kubva. €8 kana €25, sezvaunosarudza. Zvinogona kuitwa kuburikidza nePayPal, uye chinangwa ndechekuti vanogadzira vanogona kuwana rubatsiro rwemari kuti varambe vachigadzira chishandiso, kugadzirisa tsikidzi, uye nekuwedzera maficha mune ramangwana shanduro.
Zvisinei, pane zvingasarudzwa download Fritzing zvachose mahara, sekare. Uye nokuda kweizvozvo, iwe unogona kuimisa kubva kune dzimwe repos kana kubva kuGitHub saiti.
Dhawunirodha Fritzing - Saiti yepamutemo (mabhinari ane mupiro)
Dhawunirodha Fritzing - GitHub (yemahara ZIP)
Fritzing iEDA ine painogumira uye zvimwe zvakanakira. Iwe unofanirwa kuziva zvakanaka nezvakaipa kuti zvikubatsire nesarudzo:
Nharaunda yakakura yekusimudzira uye vashandisi
Mazhinji maficha uye zvishandiso zvemagetsi zvekushandisa muraibhurari yako
Yakanakira mapurojekiti akavakirwa paArduino mabhodhi
Yakanyanya kunangana neArduino mune dzimwe nzira
Zvimwe zvikanganiso zviripo mune mamwe EDA, senge kusaita kwekukwanisa kutevedzera uye kuyedza prototypes.
Maitiro ekuisa Fritzing nhanho nhanho
Kana iwe uchida kuisa Fritzing pane yako yekushandisa system, zviri nyore nyore. Heino iwe matanho ekutevera:
Inoda Microsoft Windows 7 kana yepamusoro 64-bit, macOS 10.14 kana kupfuura, kana chero Linux distro ine libc>= 2.6.
Dhawunirodha iyo AppImage kuti imhanye nyore pane akawanda distros.
Ipa mvumo yekuita kumufananidzo.
Uye ipapo unogona kudzvanya kaviri kuti utange.
Unotora .zip kubva kuGitHub.
Vhura ne unzip.
Enda kune dhairekitori reiyo isina kuvharwa Fritzing-App
Uye tinya kaviri paFritzing kana kumhanya ./Fritzing.sh kubva kune terminal
Dhawunirodha iyo .exe
Tevera wizard yekuisa uye gamuchira mamiriro
Iye zvino unogona kuvhura Fritzing
Enda kune isina kuvhurwa folda yeFritzing-App
Uye tinya kaviri paFritzing.exe
Dhaunirodha *.dmg mufananidzo.
Fambisa mufananidzo kune yako application directory
Uye iwe unogona ikozvino kuivhura kubva kuapps menyu
Dhaunirodha .zip kubva kuGitHub
Enda kune dhairekitori yeFritzing-App isina kuvhurwa
Uye tinya kaviri paFritzing
Dzimwe nzira dzeFritzing
Kana zvakadaro Dzimwe nzira dzeFritzing, une nhamba isingaperi yazvo asi, pamwe, inonyanya kunakidza yekugadzira zvigadzirwa zvemagetsi uye yekushanda neArduino-mhando mabhodhi, eRasbperry Pi, nezvimwewo, ndeaya:
SimulIDE ndeye yakavhurika sosi software (GPLv3) uye yemahara inowanikwa yeLinux, macOS uye Windows. Mukuwedzera, iyo vhezheni yeLinux inogona kuwanikwa muAppImage, inoita kuti zvinhu zvive nyore, kugona kuimhanyisa nekudzvanya kaviri.
Ndicho chaiyo-nguva yemagetsi simulator, yakagadzirirwa vadzidzi uye vanoda zvemagetsi, vese vanotanga uye vane ruzivo. Nzvimbo yekushanda inokurumidza uye yakapfava iyo yausingazongokwanisa kugadzira maseketi ako, asi iwe unogona zvakare kuita kuti vashande nenzira yakafananidzirwa kuti vaone kana vaizonyatsoshanda muchokwadi kana kwete.
Iwe unogona kugadzira akawanda maseketi nekuda kweiyo zvikamu zveraibhurari yako (voltage masosi, GND, resistors, capacitors, transistors, diode, akasanganiswa maseketi, kuratidza, nezvimwewo, inotova nemamicrocontrollers sePIC, AVR uye Arduino). Ingo dhonza zvaunoda pamusoro pebasa uye batanidza imwe kune imwe sezvaunoda. Iyo zvakare inobvumidza iwe kugadzirisa ma parameter (transistor mhando, capacitor kugona, kukosha kwekupokana, LED color, ...).
LibrePCB zvakare imwe yakanakisa yakavhurika sosi EDA chirongwa, pasi peGNU GPLv3 rezinesi, uye mahara zvachose. Izvo zvine intuitive, uye iwe unozogona kuzviisa munzvimbo dzakasiyana siyana senge macOS, Windows, uye imwe Unix/Linux.
Iyi nharaunda yekusimudzira yemagetsi ine raibhurari yakapfuma kwazvo yezvinhu uye mamwe mafungidziro chaiwo. Zvinokutendera kuti ugadzire mafaera ane fomati inonzwisisika nevanhu, uye ine yemazuva ano, intuitive uye iri nyore kushandisa graphical interface. Uyezve, ndizvo zvese mune imwe, ine maneja weprojekiti, chikamu uye schematic raibhurari, uye mupepeti.
KiCAD ndeimwe yeanonyanya kushandiswa uye nyanzvi software yekugadzira zvemagetsi. Iyi EDA ichakubvumidza kuti ugadzire kubva kudiki uye nyore maseketi kuenda kune yakaoma PCB. Inowanikwa kuLinux, Windows, FreeBSD uye macOS, yakavhurika sosi uye yemahara. YeLinux, iwe uchaiwana muRPM, DEB mapakeji uye zvakare muFlatpak, pakati pevamwe.
Este EDA zvakare yakakwana kwazvo, ine schematic kubatwa kunotsigirwa mupepeti wayo, yakavakirwa-mukati SPICE simulator kuratidza kushanda, hombe chikamu raibhurari, mukana wekugadzira yako pachako zviratidzo uye uzvishandise mukuwedzera kune izvo zvepamutemo raibhurari, ine-nyore kushandisa uye ine simba mupepeti. , uye nemuoni 3D kukwanisa kuona mhedzisiro mumativi matatu uye kuona chimiro chayo nemifananidzo yechokwadi.
EasyEDA inogona zvakare kuve imwe nzira huru kune Fritzing yeLinux, macOS uye Windows. Iwe zvakare une online vhezheni, kana uchida, kana nedesktop mutengi app, iri nyore zvakaenzana, ine simba, inokurumidza uye yakareruka. Iwe uchawana mabasa akafanana mune yemuno kana yepamhepo vhezheni.
La ruzivo rwemushandisi rwakanaka, uye kana wakatoshandisa mamwe maturusi ekugadzira PCB, unozokwanisa kuibata kunze kwebhokisi. Iyo ine yakanaka GUI yekushanda nayo uye kuita kuti mapurojekiti ako aitwe (dunhu simulation, PCB dhizaini, uye yemagetsi dhizaini). Mukuwedzera, iwe hauzoda activation, kunyoresa, marezinesi, kana logins. Uye inopa mamwe ekuchengetedza ekuwedzera kuita makopi enzvimbo otomatiki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » General » Fritzing: software yevagadziri uye zvemagetsi (uye dzimwe nzira)
M5Stack: zvese zvinopihwa nekambani iyi muIoT
Ndeipi maindasitiri 3D printer yekutenga